[Topnews] Wiil toogasho xaqdaraa lagu xukumay Xamar Ciidda ka hor oo codsaday inuu gabadhiisa yar la kulmo iyo farxad daradii ka raacday
Monday June 11, 2018 - 10:24:38 in Wararka by Super Admin
Waagacusub.com - Fadlan si degan u akhri qisadaan xanuunka badan oo ku saabsan Aabbe toogasho xaqdaraa ay ku xukumeen Garsoorka Dowladda Muqdisho ee Farmaajo. Waxa lagu xukumay wilkan Dil togasho ah. Waxana lagu fulinaya dilka laba maalmod ka hor ma
Waagacusub.com - Fadlan si degan u akhri qisadaan xanuunka badan oo ku saabsan Aabbe toogasho xaqdaraa ay ku xukumeen Garsoorka Dowladda Muqdisho ee Farmaajo. Waxa lagu xukumay wilkan Dil togasho ah. Waxana lagu fulinaya dilka laba maalmod ka hor maalinka ciida ciidul fitriga. Wuxu ka codsaday Sarakiisha Xabsiga in loo ogolaado inu arko inantisa yar ka hor intan aan lagu fulin dilka. wuxuna lahadlay reerkisa ama afadisa wuxuna ku yiri sidatan.
"Waxa laga yaba inan fursad u heli waayo inan arko farxada wajigiina kamuqan doonta maalinka ciida, oo waxan mari doona ciqaab sababi doonta inaynan mar-dambe is arag, on macsalameyo dunida sida darteed waxan ka codsanaya inad iiguso labisto inanteyda yar, unaso xirto dharkeda ciida iiguna kento xabsiga, si aan u arko farxada wajigeda ayna igula muuqato inan laqeysaday faraxada ciida"
Baaristaan sameeynay waxeey xaqiijineysaa in si been abuura loo xiray kadibna jirdil lagu sameeyay kadib lagu qasbay inuu qirto dimbi uusan gelin. tani waxeey geleeysaa gal dacwadeedka gabood falka ay geeysanayaan Dowladda Muqdisho ee kooxda Farmaajo.
Run ahanti waxa dunidan ku nool malayin muslimiin ah oo qaba baahiya kala duwan fadlan aynu uduceyno musliminta meelkasta ay dunidan ka joogan gaar ahaan Aabahaan Soomaaliyeed.